Contact yaac iyo waa ugub ah taas oo ka dhigaysa cadaabta ka mid ah user ah iPhone iyo sabab la mid ah xiriirrada labalaabka waa in la tirtiro si loo hubiyo in user helo ugu wanaagsan ee reer telefoonka iyo xiriirrada ayaa waxaa sidoo kale lagu hayaa si. Waxaa sidoo kale in la xusay in user waa inay hubiyaan in tutorial ee arrintan la xiriira waxaa lagu akhriyey oo fahmay in buuxa si ay ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in lagu macnayn lahaa oo aan la raacin oo keli ah, laakiin waxay sidoo kale codsatay in haddii ay jirto waa marka ku xigta si looga fogaado in dhib kasta.
Mid ka mid ah click in ay tirtirto dhan / xiriirada kala duwan ka iPhone
Wondershare TunesGo Retro waa kan ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado maamulka xiriirka iPhone. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa si waafaqsan tilmaamaha ku ah horumarinta si ay natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa sameeyo. Barnaamijku waa ma aha oo kaliya fududahay in la isticmaalo, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo ugu wanaagsan ee reer fikradda ah in la soo gundhig gudahood oo halkan ka siinayaa khibrad user cabsi badan.
Ka dib markii qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee barnaamijka taas oo shaki ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee jeer oo dhan ka dhigaysa:
Marka laga reebo xiriir barnaamijkan waxay hubineysaa in uu user helo waayo-aragnimo ugu fiican ee la xiriirta Lugood ah, videos iyo sawiro maamulka.
iPhone u baahan Lugood si hagaagsan iyo music wareejiyo qalabka laakiin iyadoo la isticmaalayo Wondershare TunesGo Retro xadaynta tani waxaa u qaaday hal mar oo dhan iyo maamulka music uu noqdo mid fudud.
Barnaamijkan ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in la wadaago music ka iCloud ah waa wax fudud oo is keenaysay.
Habkaani wuxuu ku soo jiitaa iyo hoos u gundhig gudahood barnaamijka hubiyaa in user helo natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado wareejinta photos, fariimaha, xiriirada iyo files.
Qodobka ugu muhiimsan ee dhan waa in barnaamijka la ah lacag damaanad dib 30 maalmood iyada oo su'aalo weydiiyay ma timaado.
Isticmaalka Wondershare TunesGo Retro in ay tirtirto dhammaan xiriirada ka iPhone
Geedi socodka uu soo hoos ku xusan waa mid ka mid ah in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah waayo-aragnimo tahay ee la xiriirta su'aasha sakhiray dhigi lahaa:
Hubi in barnaamijka noo degsan, rakibay oo iPhone waxaa sidoo kale ku xiran si interface ugu weyn waxaa lagu ogaadaa,
Laga soo bilaabo guddi bidix halka macluumaadka telefoonka waxaa lagu soo bandhigay user ay u baahan tahay in la hubiyo in bar xiriirrada la doorto iyo markaas xiriirrada in ay tahay in la tirtiro waa kuwa sidoo kale loo doortay:
Button ayaa delete waxaa markaas in la riixi si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka iyo nidaamka halkan dhamaado sida xiriirada laga tirtirayaa telefoonka gebi ahaanba:
Sidee in ay tirtirto xiriirada nuqul on iPhone
Si aad u hubiso in user helo waayo-aragnimo ugu fiican waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda la ansaxiyey in danta ugu fiican ee qalabka sameeyo ::
User wuxuu u baahan yahay inaad kala soo baxdo, rakibi ka dibna lagu xiro qalabka si ay barnaamijka waxa lagu ogaadaa.
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in bar xiriirrada waxaa riixi ee guddiga bidix iyo tab de-nuqul waxaa riixi dusheeda. Waxa kale oo hubin doona in xiriirrada nuqul la ogaan oo soo bandhigay:
Barnaamijku wuxuu ka dibna bilaabi doonaan in ay ka heli xiriirrada nuqul:
4. user ayaa markaas u baahan yahay inuu riix badhanka ka tirtirto ka dib xulashada xiriirada barya si loo soo afjaro nidaamka:
Arrimaha caadiga ah ee la tirtiro xiriirada iPhone
Waa mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee loo soo food saaray dadka ee la xiriirta tirtirka xiriirrada. Qorshahaa waxa ka mid ah macruufka ayaa ka masuul ah arrinta iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in tilmaamaha posted ee waxay shirar kala duwan la raacay sida kuwa halkan
Xiriirada aan la aqoonsan yahay
Sidoo kale waa mid ka mid ah arrimaha ugu tirada oo uu soo badbaadiyey in iPhone ka dhanka ah magac gaar ah aan la soo bandhigay iyo tirada la soo bandhigay halkii. Waa mid ka mid ah arrimaha ugu daran ee waqtiyada oo dhan iyo user xalka la xiriira ka heli kartaa halkan
iCloud syncs xiriir la tirtiro
Sidoo kale waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ay waajahaan user taas oo keliya ma aha ka niyad isticmaalka qalabka laakiin sidoo kale kaxeeya ka nuts user. Geedi socodka ayaa lagu xusay in dhamaystiran halkan iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa inay raacaan talaabooyinkan si ay u hubiso in arrinta la xalin.
Waxaa jira arrimo dhowr ah oo kale sida soo dejinta xiriirrada, dhoofinta iyo arrimaha la xiriira qalab ah oo u horseeddaa dhibaatooyin iyo sababaha isku waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in ay raacaan forums online iyo tiirarka si loo hubiyo in dhibaatadu tahay xalin iyo xaalada ayaa ah mid ay kagacan siiyaan hal mar oo dhan.
> Resource > iPhone > Sida loo Delete All / Xiriirada nuqul ka Your iPhone